Basa rezvemagariro - Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd.
Enterprises uye vashandi
Iyo kambani yakagara yakanamatira kune yakatarisana nevanhu pfungwa, chengetedza kodzero uye zvido zvevashandi vebhizinesi, ichipa pekugara mahara uye mahusiku ehusiku evashandi vekugadzira michina, kumisikidza mubatsiri zano bhokisi retsamba, teerera kune izwi revashandi, uye shingairira kugadzira chikuva yekuwedzera kukura kwemabhizinesi nevashandi.
Enterprises, vatengesi uye vatengi
Panyaya yevatengesi nevatengi, kubatana kwayo kwenguva refu nekambani kwave kuchitsigirwa panguva yekuzivisa. Inonamatira kune pfungwa yekutendeseka uye kuvimbika, kambani inotsvaga kusimudzira nevatengesi nevatengi, uye kubatana kwakaringana kwakasimbiswa.
Enterprise uye nzanga
Sekambani yeruzhinji isina kunyorwa, kambani ino tarisa zvakanyanya kune avo vehukama kuita sekambani yeruzhinji isina kunyorwa ichirwira kudzoka kwehupfumi kune vagovana. Kuti ishandise zvakadzama danho rekuvandudza hurombo uye mweya, kambani yakaedza nesimba kuita chinzvimbo chemakambani eruzhinji asina kunyorwa mukushandira zano renyika rekudzora hurombo. Munguva yekuburitsa nguva, kambani yakagadzirisa hurongwa hwekudzora hurombo munzira dzakasiyana siyana, uye mumakore apfuura, yakapa makumi ezviuru zveyuan kutsigira kuvakwa kwenzvimbo dzakashata.